The Last Undammed River MASTER - Myanmar Water Portal
သံလွင်မြစ်သည် ဟိမဝန္တာမှ တရုတ်နိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့ကို လွတ်လပ်စွာ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းပါသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များက သံလွင်မြစ်အား ရေလမ်းတောများထဲတွင် သဘာဝလျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖုံးကွယ်ထားရှိရာ ကမ္ဘာကြီးဂြိုဟ်ရဲ့ ဇီဝမျိုးကွဲများ များပြားစွာတည်ရှိပေါက်ပွါးကြသည့် နေရာတစ်ခုအဖြစ်သိပ္ပံပညာရှင်များကချီးကျူးကြသည်။
'The Thanlwin: The Last Undammed River' မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တိုတွင် လွတ်လပ်စွာစီးဆင်းသည့်သံလွင်မြစ်၏အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သည့် ကောင်းမွန်သော မြေသြဇာမြေဆီလွှာ၊ ပေါများသည့်ငါးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာလုံခြုံမှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း အခွင့်အလမ်းတို့နှင့် မြန်မာ့စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အရေးပါသည်ဟုယူဆသည့် မြစ်စီးဆင်းမှုကိုရေကာတာဖြင့်ပိတ်ဆို့ကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့်ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရန်ဖိအားတို့အကြားတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့်ပွတ်တိုက်မှုများအကြောင်းကို စူးစမ်းလေ့လာထားပါသည်။
Thanlwin River flows freely from Himalayan Plateau to China and Myanmar. Scientists gave compliments that Thanlwin river isaplace where covered by different natural species on earth through rivers and jungles.
'The Thanlwin: The Last Undammed River' documentary short movie shows the story between energy investment towards building dams on the river and natural resources provider, supporting good soil, abundant fishery, food security, livelihood, river transports.
In the credits at the end we thanks KESAN & ADAM OSWELL /KWCI for additional footage
Tom Fawthrop/Eureka Films
Making films about environment, health and grassroots politics in the developing world
Cambodia - The Mekong -Lao -Cambodia -Vietnam
Myanmar Peace Talks The Salween River
Cuba "Healing Africa –The Havana Prescription" www.tomfawthropmedia.com
Thailand +66 869749825
မြန်မာ့ရာဇဝင်ကို ပြောပြမယ့် ဧရာဝတီမြစ်ဝ အနည်များ လ...
Integrated Water Resources Management Dams & Bridges Climate Change Drinking Water Water Quality Flooding Ecosystem Services Waste Water Groundwater Urban Development